यी ३ राशी भएका पुरुषहरुले पाउँछन् ‘सुन्दर’ र ‘गुणवती’ श्रीमती ! जानी राखौ «
यी ३ राशी भएका पुरुषहरुले पाउँछन् ‘सुन्दर’ र ‘गुणवती’ श्रीमती ! जानी राखौ
Published : 27 April, 2020 8:49 am
खासगरी हरेक पुरुषले आफ्नो जीवनसाथी सुन्दर होस् भन्ने चाहना राख्छन्। तर, यो सौभाग्य कसैलाई जुर्छ, कसैलाई जुर्दैन। यसमाथि पनि सबैले सुन्दरतालाई मात्रै जीवनसाथीको मापक नराख्न पनि सक्छन्। यद्यपी, ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी तल प्रस्तुत गरिएको राशिका पुरुषहरुले सुन्दरसँगै गुणवती जीवनसाथी पाउने विश्वास गरिन्छ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार तुला राशि भएका पुरुष सबैभन्दा भाग्यमानी मानिन्छन् । तुला राशि भएका व्यक्ति धेरै भावक र समझदार हुने पनि गर्छन । यी राशि भएका पुरुषकोप प्रमुख विशेषता भनेकै आफ्नो सहयात्रीसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल हुनु हो।